Apo usingagoni kubata yakanaka rokuoneswa chako chitima hwindo pakushanyira Croatia. Kiroshiya ichinyatsozivikanwa kwake zvinoshamisa uye kufema kuvira kwezuva, saka iva nechokwadi chokuti iwe vane makagadzirira kamera yako sezvo uri akasungwa kuwana Best chitima anokwira muEurope panguva ravira pano.
Paunofunga Jerimani, murege pafunge kuva yakanaka chitima anokwira muEurope panguva kuvira kwezuva, asi iwe uchava mate kushamiswa chii chinofanira kupa. Nemiwo kuwana maonero rino zuva nezuva kubva Chirungu Garden mu Munich. Funga risina makore matenga uye wakanaka guta Skyline.
Uyu ndiwo mumwe yakanakisisa zvakavanzika! uye mumwe yakanakisisa chitima anokwira mu Europe, It iri mhenderekedzo pamusoro Sardinia kumadokero, Itari. S'Archittu duku gungwa dzisina kuti chete vari kuziva! The chikuru Wave zvirokwazvo chinhu kushamiswa, asi iva nechokwadi iwe utore shoma walkways yakagadzirwa-namabwe zvishoma vaifamba. Iwe unozoguma mune izvo gem chaiyo yemusha: mumwe reraimu Arch dzakagadzira nokuda kuramba chiito yegungwa. Kana gungwa akadzikama, zvakafanana kazhinji zviri chirimo, kana kwasharara, runowanzoitika nguva yechando, kumavirazuva muna S'Archittu anogara chikonzero kufaranuka uye kutora nguva ndinototsvaka pa.
Iva nechokwadi chokuti rako chete hanya ari kamera yako kana runhare App wakagadzirira nenguva kutora ari runako iri Europe apo zuva rinovira. Book chitima nepaunogona anokwira mu Europe nesu pa SaveaTrain.
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-train-rides-europe-sunset%2F%0A - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)